ESI KPOCHAPỤ AKỤKỌ IHE MERE EME NA INTERNET EXPLORER - INTERNET EXPLORER - 2019
Hichapụ akụkọ ihe mere eme na Internet Explorer
Taa, anyị ga-elebakwu anya iji mepụta ihe oyiyi ISO. Usoro a dị nnọọ mfe, na ihe niile ị chọrọ bụ software pụrụ iche, yana ịgbasochi ntụziaka ndị ọzọ.
Iji mepụta oyiyi disk, anyị ga-eji usoro ihe omume UltraISO, nke bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu iji rụọ ọrụ na diski, ihe oyiyi na ozi.
Kedu esi emepụta ihe oyiyi disk ISO?
1. Ọ bụrụ na i tinyebeghị UltraISO ma, wụnye ya na kọmputa gị.
2. Ọ bụrụ na ị mepụta ihe ISO-si na diski, ị ga-etinye fanyere n'ime mbanye ma malite usoro ihe omume ahụ. Ọ bụrụ na ihe oyiyi ahụ ga - esi na faịlụ gị na kọmputa gị, mepee windo mmemme ozugbo.
3. N'okpuru aka ekpe nke window ihe omume ahụ nke na-egosi, mepee folda ma ọ bụ bugharịa nke ọdịnaya ịchọrọ ịtụgharị gaa na ihe oyiyi ISO. N'ọnọdụ anyị, anyị họọrọ diski disk na disk, ọdịnaya ya ga-ehichapụ na kọmputa na vidiyo vidiyo.
4. A ga-egosipụta ọdịnaya nke diski ma ọ bụ folda ahọrọ na mpaghara etiti ala nke windo ahụ. Họrọ faịlụ ndị a ga-agbakwunye na mbiet ahụ (na ihe atụ anyị, ndị a bụ faịlụ niile, wee pịa Ctrl A), wee pịa aka nri na na menu a gosipụtara, họta ihe ahụ "Tinye".
5. Fichị ị họrọ ga-apụta na elu nke Ultra ISO. Iji mezue usoro nke ịmepụta ihe oyiyi, ị ga-aga menu "Njikwa" - "Zọpụta Dị ka".
6. A ga-egosi windo ebe ị ga-ezipụta nchekwa ahụ iji chekwaa faịlụ na aha ya. Rịba ama kọlụm "Ụdị Njikwa" nke a ga-ahọrọ ihe ahụ "ISO faịlụ". Ọ bụrụ na ị nwere ihe dị iche, họrọ nke ịchọrọ. Iji mezue, pịa "Chekwa".
Hụkwa: Mmemme maka ịmepụta ihe oyiyi disk
Nke a mezuru ihe okike nke onyinyo ahụ site na iji usoro UltraISO. N'otu ụzọ ahụ, a na-emepụta usoro ihe oyiyi ndị ọzọ n'usoro ihe omume ahụ, Otú ọ dị, tupu ịchekwa, a ghaghị ịhọrọ usoro mbiet achọrọ na kọlụm "Ụdị faịlụ".